Melgrati dia mahatonga anao hahita tontolo hafa izay eo ambanin'ny isan'andro isan'andro | Famoronana an-tserasera
ankehitriny ny fiarahamonintsika dia manana teboka mora hanehoana ny banal mety ho lasa zava-drehetra izany. Ny sarin'i Marco Melgrati no fomba mety indrindra hahitantsika fa tsy izay rehetra amidy amin'ny fahitalavitra sy dokam-barotra dia tonga lafatra, tahaka ny miseho amin'ny vaovao sy ny haino aman-jery hafa.
Kolikoly politika, mpitondra pseudo na ireo lamaody vaovao ireo izay tafiditra ao anaty isan'andro isan'andro mba hitondrana antsika amin'ny toerana iray miaraka amin'ny finday, dia ampahany amin'ny atiny asehon'ity mpanakanto italiana ity avy amin'ny kaontiny Instagram.
Amin'ny fotoana iray toa tsy misy dikany sy hadalana daholo ny zava-drehetra, ary tsy afaka manao izany isika hahita antsika na ny foibentsika, Melgrati manandrana mikapoka kely ao an-tsainao mba hafa ny fahitanao ny zavatra; na te hampiseho ny adalàn'ny tarehin-tsoratra sasany.
Avy amin'ilay rindrin'ny hysteria tianao hamboarina eo anelanelan'ny firenena roa, na ilay hazo fijaliana izay mamela alokaloka iray izay tena mitovy amin'ny tambajotra fanta-daza, Melgrati mamela ny tenany ho hita sy ho hita ao amin'ny Kaonty Instagram hanana azy ary ho fampisehoana hahitanao ny kantony.
Mpanakanto iray liana amin'ny sary nataony, ny lokony sy ireo hafatra izay ravina nohitsakitsahin'ny sary tsirairay avy amporisihinay ianao hahafantatra avy eto sy avy amin'ny tambajotra sosialy voalaza.
Ny marina izay ny ohatra sy ny fomba fahatakaran'izy ireo dia be dia be lafin-javatra sasany eo amin'ny tontolontsika izay toa nitarika ho amin'ny farany izay nanalavirantsika tena rehetra. Tsy vao izao no fotoana farany a andiana mpanakanto mpikomy izay mampivoatra ny fisainana mitsikera; rehefa tsy mivadika ho conspiranoia madio hametahana azy ary hametraka azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Marco Melgrati sy ireo sary manahirana azy amin'ny andro izay manohina antsika
Bokeh, na izay mety ho ny Instagram mifantoka amin'ny fiainana manokana manaraka
Ity no sary famantarana X-Men vaovao navoakan'i Marvel